Wada-hadalada Somaliland iyo Soomaalia, Iyo Dareenka Dadweynaha Qoraa Aadan Muuse Jibriil “Dadweynuhu waa awoodda ugu sarraysa ee Xukunka dimoqoraadiga ah” | Salaan Media
Wada-hadalada Somaliland iyo Soomaalia, Iyo Dareenka Dadweynaha Qoraa Aadan Muuse Jibriil “Dadweynuhu waa awoodda ugu sarraysa ee Xukunka dimoqoraadiga ah”
Xukuumadda Dimoqoraadiga ahi waxay kursiga ugu fadhidaa waxa loo yaqaan sharciyadda (Legitimacy) taas oo laba qaybood ah, mid DISTOORI ah iyo mid MOORAL ah. Tan Distooriga ahi waxay ku fadhida distoorka dalka u yaalla oo ah heshiis la kala qortay, Shacabka iyo maamulka dawladda ee markaas jooga. kaas oo ah waxa shacabku kula xisaabtamo xukuumaddiisa, waxii ay ku ballan qaaday fulinteeda, ka gaabis iyo ku xadgudubkaba Distoorka, hadday dhacdo. Taasi waa arrin la wada yaqaano. Middase dadka inta badani aanay aqoonin oo aad tan hore uga sii muhiimsani waa tan MOORALKA ah ama macnawiga ah. Maxay tahay, siday se u shaqaysaa?
Sharciyada dhinaceed MOORALKA ahi waa kalsoonida dhextaalla dadweynaha iyo madaxdiisa. kalsoonidaas waxaa lagu metalaa sidii dhul cagaaran oo doog leh, oo isha, dhegta iyo maskaxduba ku raaxaystaan, dhulkaas oo u dhexeeya dadka iyo madaxdiisa. Marka xaalku sidaas yahay, wax kasta oo go’aamo ah oo madaxdu gaadho ayaa dhegta dadweynaha markay ku dhacdo waxay samaysa falcelis wanaagsan oo sida geedo caleenle u ifaysa. Markaas wax kasta oo madaxda laga sheegaa xattaa hadday tahay wax ka duwan waxay filayeen dadweynuhu wuu la jaan qaadaa oo ma shraysto. Haddiise madaxdu gasho khaladaad badan oo isbiirsada, waxaa halkaas ka bilaabma shaki iyo dib u gurasho kalsoonidii lagu qabey madaxda. Mar haddi taasu dhacdo waa in la daweeyo si deg deg ahna madaxdu isu saxdo. Haddii taas la waayo maxaa dhaca. Sida taariikhda lagu soo arkay, waxa samaysma bartii ugu horraysey ee dhul lama degaana oo aan biyo iyo bad midna lahayn oo isha, dhegta iyo maskaxduba ku basaasto. Dhulkaas lama degaanka ahi maalinba maalinta ka dambaysa ayuu sii balladhaa, oo dhulkii markii hore wada cagaarka ahaa sidu maalin walba ugu soo durkayo ayaa baaxaddiisu wada gaadhaa dhulkii cagaarka ahaa. Markaasu cunaa wax alla waxii kalsooni ahaa ee ka dhexeeyey dadka iyo madaxdiisa. Marka halkaas la gaadho, ayaa waxay culimadu tidhahdaa waxaa dhammaday sharciyaddii madaxdu ku fadhidey kursiga dhinaceedii MOORALKA ahaa, waxaa soo hadhaa waa dhinacii Distooriga ahaa oo keliya. Wixii intaas ka dambeeyaa waa xukuumadda oo adeegsata qoriga, askariga iyo xabsiga oo ayaguna ugu dambaysta howl-gab noqda.
Qoraa Aadan Muuse Jibriil